कहिलेबाट आउला मध्यभोटेकोशीको सेयर कारोबारमा ? कहाँ पुग्यो सूचीकरणको प्रक्रिया ? Bizshala -
काठमाण्डौ । मध्यभोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीको सेयर आगामी साताभित्रै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत गर्ने तयारी भइरहेको छ।
कम्पनीका सीईओ रामगोपाल शिवाकोटीका अनुसार अर्को साताभित्रै नेप्सेमा मध्यभोटेकोशीको आईपीओ सूचीकृत गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। ‘ठूलो भोलुममा सेयर हुनु र संस्थापक, स्थानीय र सर्वसाधारणको डाटा मिलाउन समय लागेकोले सूचीकरणका लागि केही समय लागेको हो’, उनले भने, ‘सम्भवतः शुक्रबारसम्म सीडीएससीमा काम गरेर अर्को साताभित्रै नेप्सेमा सूचीकृत गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। आगामी बुधबारसम्म सेयर सूचीकृत भए अर्को साताबाटै सेयर कारोबारमा आउने सम्भावना छ।’
सीडीएससीका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले पनि मध्यभोटेकोशीको डकुमेन्ट सीडीएससीमा आइपुगेको बताए। ‘भोलिसम्म सीडीएससीले यो कम्पनी सबै प्रक्रिया पूरा गर्नेछ’, उनले भने, ‘त्यसपछि कम्पनीले नेप्सेमा सूचीकृतको प्रक्रिया अगाडि बढाउला।’